Maungtintyin: ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်း- စစ်ပွဲရဲ့အဆိပ်ဖြေဆေးအနေဖြင့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ
ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်း- စစ်ပွဲရဲ့အဆိပ်ဖြေဆေးအနေဖြင့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ
MAHATMA Gandhi က “ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် လမ်းမရှိဘူး။ ငြိမ်းချမ်းရေးသည် လမ်းပဲ ဖြစ်တယ်” ဆိုတဲ့ လက်ဖျားခါလောက်တဲ့ အမှန်တရားကို ပေးပါတယ်။ စစ်ပွဲတည်းဟူသောနွံအိုင်ထဲမှာ နစ်မြုပ်နေတဲ့ တိုင်းပြည်များအတွက် ဒီမျက်စိဖွင့်ပေးလိုက်ခြင်းက မျော်လင့်ချက်ရဲ့အချက်ပြမီး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
US မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးလှုပ်ရှားမှုသမိုင်းကြောင်းကို သဘောထားကွဲစေပြီး ခါးခါးသီးသီးဖြစ်စေပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ Vietnam ငြိမ်းချမ်းရေးလှုပ်ရှားမှုက တရှဲရှဲတဖျစ်ဖျစ်မည်ပြီးတဲ့နောက် အနှစ် ၃၀-အကြာ - ငြိမ်းချမ်းရေးကို အမှန်တကယ် အထောက်အကူပြုသည့်တိုင်အောင် သမ္မတလောင်းကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်အတွက် နိုင်ငံရေးကိုယ့်ကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်မှုအဖြစ် အဲဒါကို ယူဆနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
စစ်ဆန့်ကျင်ရေး နောက်ခံရှိတဲ့ Senator Kerry က အဲဒီအချက်ကို ဖုံးကွယ်ဖို့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကြိုးစားနေပါတယ်။
စစ်ပွဲကို ခေါင်းရှောင်ဖို့အတွက် နောက်ခံရှိတဲ့ President Bush က သဘောထားတင်မာသူဖြစ်ခြင်းဖြင့် အဲဒီအချက်ကို ဖုံးကွယ်ဖို့ အသည်းအသန် ကြိုးစားနေပါတယ်။
ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနှစ်ယောက်လုံးဟာ ရွေးစရာတစ်ခုအဖြစ် ငြိမ်းချမ်းရေးကို ကမ်းလှမ်းဖို့ ပျက်ကွက်ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာ “စစ်ပွဲက ငြိမ်းချမ်းရေး လမ်း ဖြစ်တယ်”လို့ အချက်အချာကျတဲ့ဝါဒရေးရာအပေါ်မှာ သဘောတူကတည်းက ဖြစ်ပါတယ်။
( ဒါဟာ Iraq ကို ဆန့်ကျင်တဲ့ ထင်ရှားတဲ့ စစ်ပွဲ- ပြီးနောက် အကြမ်းဖက်သမားများနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အထွေထွေစစ်ပွဲ မဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုလျင်)။ ဒီလိုအမြင်အတိုင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့မယ်ဆိုလျင် အကြမ်းဖက်ခြင်းများဆီသို့သာ ဦးတည်နိုင်ပါတယ်။
- ငြိမ်းချမ်းရေးဟာ သူကိုယ်တိုင် အတွင်းမှာရော သူတိုယ်တိုင်အနေဖြင့်ပါ လမ်းဖြစ်တယ် - ဆိုတာကို နိုင်ငံတစ်ခုက သဘောပေါက်တဲ့အခါမှသာ ကြာရှည်ခံတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကို အောင်မြင်တယ် - လို့ Gandhi က ထောက်ပြညွှန်ပြပြောဆိုခဲ့တာဟာ မှန်ကန်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အဲဒီနည်းလမ်းက ဘာဖြစ်စေလိမ့်မှာလဲ? ….. စစ်ပွဲက သယ်ဆောင်လာတဲ့ ကျေနပ်မှုအားလုံးအတွက် အစားထိုးသည့်အရာများကို စီစဉ်ပေးခြင်းဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းက အောင်မြင်နိုင်သည်သာ ဖြစ်ပါတယ်။
တရားဝင်အရ နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သည်အားလျော်စွာ စစ်ပွဲကို ကန့်ကွက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အပေါ်ယံမျက်နှာပြင်အောက်မှာ စစ်ပွဲက ကျေနပ်နှစ်သက်ဖွယ်ရာ ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို ရှင်းလင်းလာပါတယ်။
အားလုံးထဲက ပထမဆုံးအနေနဲ့ စစ်ပွဲဟာ သက်တောင့်သက်သာရှိတဲ့- နေသားတကျဖြစ်တဲ့ အလေ့အကျင့် တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားအလေ့အကျင့်များလို - အကျွန်ုပ်တို့ဖြတ်ရမည်ဆိုတာ တတွတ်တွတ်ပြောနေသည့်တိုင်အောင်- ဆေးလိပ်တစ်လိပ်ပြီးတစ်လိပ် ဆက်သောက်သူတစ်ယောက်က စီကရက်တစ်လိပ်ကို လက်ကမ်းတဲ့ နည်းလမ်းကဲ့သို့ - အဲဒါကို အကျွန်ုပ်တို့က ကမ်လှမ်းနိုင်ပါတယ်။
Vanity Fair-ကို ဆီလျော်အောင်ပြုပြင်ထားတဲ့ Mira Nair ရုပ်ရှင်မှာ - အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က ပါတီတစ်ခုတွင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဟုတ်လှပြီလို့ ဘ၀င်ခိုက်လျက် ထင်မြင်ချက်ပေးပါတယ်။ အဲဒါကတော့ “စစ်ပွဲဟာ ယောကျာင်္းသားများအတွက် နှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်ပါတယ် - ကောင်းပါတယ်။ အဲဒါဟာ မြေဆီမြေလွှာကို လွှဲပြောင်း ပေးလိုက်သလို- လက်အပ်လိုက်သလို ဖြစ်ပါတယ်” ဆိုတာပါ။
ဒါ့ကြောင့် စစ်ပွဲဟာ, ယောင်္ကျားသားများ ကျူးကျော်ရန်စဖို့အတွက် ထွက်ပေါက်တစ်ခု ကြိုတင်စီမံထားပုံ ပေါ်ပါတယ်။
နိုင်ငံရေးကိုယ်စားလှယ်လောင်းနှစ်ယောက်ဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးပြည့်ဝစေခြင်း-ဖြည့်ဆည်းမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ ပြောဆိုဖို့ စတင်နိုင်ပါသလား? …. အကျွန်ုပ်တို့ဟာ အဲဒါတွေကို မှန်သည်ဟုမှတ်ယူသော်လည်း ၉/၁၁ - မတိုင်မီ ဒီအရာတွေဟာ တကယ်လုံလောက်ခဲ့ပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေးအနေဖြင့် တစ်စုံတစ်ယောက်ဟာ အသက်ရှုချောင်ပါတယ်။ အခြားသူများနဲ့ ခိုင်မြဲစွာချည်နှောင်ဖို့ ချိတ်ဆက်ပေးဖို့အတွက် လမ်းဖွင့်ပေးရန်-ခွင့်ပြုရန် နေရာရှိပါတယ်။ ငြင်းခုံဆွေးနွေးမှုများဟာ အသီးသီးသော ဘက်အတွက် အပြန်အလှန်လေးစားမှုနဲ့ ဆက်လုပ်ကြပါတယ်။
Gandhi - ဟာ - ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းက - ဆင်းရဲဒုက္ခများ၊ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုများကို နိဂုံးချုပ်တယ် - ရန်သူ တစ်ယောက်ကို ယှဉ်၍ စစ်ဖက်ပြိုင်နေခြင်းမဟုတ် - ဒါပေမယ့် မှားယွင်းမှုများအတွက် သက်သေခံခြင်း-သက်သေပြုခြင်းဖြစ်တယ် - ညှာတာထောက်ထားမှုကို အခွင့်အရေးပေးခြင်းနဲ့ - သူတို့ရဲ့ စိတ်ရှည်သည်းခံတဲ့ အလုပ်များကို ပြုလုပ်ဖို့ ဖြစ်နေကျတွေ့နေကျလူ့သဘောသဘာဝများကို လမ်းဖွင့်ပေးခြင်းဖြစ်တယ် - ဆိုတာကို ပြဖို့ နောက်ထပ်တိုး၍ သွားခဲ့ပါတယ်။
Nelson Mandela နဲ့ Mother Teresa တို့ဟာ ကြီးမားကျယ်ပြန့်ပြီး အလွန်နက်ရှိုင်းတဲ့ အရာဝတ္ထုများကို အောင်မြင်ဖို့ အလားအလာရှိတဲ့လမ်းတစ်ခု ဖြစ်ဖို့ သက်သေပြတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာ ခြားနားတဲ့ အသွင်အပြင်အပေါ်မှာ နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။
တစ်ဦးချင်းအလိုက် ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကို ဖော်ထုတ်တဲ့အခါ မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲရှိ တကယ့် ဆဲလ်ထဲသို့ နိမ့်ဆင်းပြောင်းလဲသွားပါတယ်။ Mother Teresa ရဲ့ ရုပ်ရှင်တစ်ခုကို အစဉ်လိုက်မဟုတ်ဘဲ အလျဉ်းသင့်သလို အကြောင်းအရာကိုပြတဲ့ လက်တွေ့ သုတေသီတစ်ဦးက - သူတို့ရဲ့ကိုယ်ခံအားများဟာ ချက်ချင်းလက်ငင်း တုံပြန်အဖြေပေးခဲ့တယ်- ဆိုတာကို တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
IGA-လို့ခေါ်တဲ့ immunoglobulin တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ တိုးတက်မှုက - ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဖော်ထုတ်ခြင်း-ထိတွေ့ခြင်းဟာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခုခံ ကာကွယ်ခြင်း- အကာအကွယ်ကို အမှန်တိုးပွါးစေတယ် - ဆိုတာကို သက်သေပြုထားပါတယ်။
အကြောင်းအရာများက Mother Teresa ကို ထောက်ခံသလား မထောက်ခံဘူးလား - သဘောကျသလား သဘောမကျဘူးလား - ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဂရုမစိုက်ဘဲ-ထည့်သွင်းမစဉ်းစားဘဲ ဒီအဖြစ်အပျက်များဟာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာပါ။ ဒါဟာ အကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင် အပါအ၀င် အရိုးသားဆုံးဖြစ်ဖို့ အချိန် ဖြစ်ပါတယ်။
အကျွန်ုပ်တို့ဟာ တရားမျှတတဲ့ အခွင့်အရေး- အကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှု- ကံကောင်းထောက်မမှုကို ငြိမ်းချမ်းရေး လမ်းသို့ ခွင့်ပြုပြီး ပေးထားပြီးမဟုတ်ပါ။ - ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းဟာ စစ်ပွဲရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တယ်- စစ်ပွဲရဲ့အခြားတစ်ဖက်မှာရှိတယ်- ဆိုတဲ့ အခြေအနေအရပ်ရပ် အရာရာတိုင်းကို နှစ်မြှုပ်ထားတဲ့ အစစ်အမှန် ရိုးသားမှုကို လိုအပ်ပါတယ်။
Gandhi ရဲ့ ချစ်မြတ်နိုးစရာကောင်းတဲ့တန်ဖို့များကတော့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း အကြမ်းမဖက်ခြင်းထက် ပိုလွန်တဲ့ အဟိံသ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဟိံသဟာ ဘ၀ကို လေးစားမြတ်နိုးပြီး - လူသားများဆိုင်ရာ စက္ခုပသာဒအမြင်တစ်ခုဟာ - တစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမျှ ခြွင်းချန်ကြဉ်ဖယ်ထားခြင်းမရှိဘဲ - တစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမျှ သင့်ရဲ့ရန်သူအဖြစ် ပြုလုပ်ခြင်းမရှိဘဲ - သူတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မွေးရာပါအခွင့်အရေးကို စူးစမ်းရှာဖွေဖို့ - ဒီကမ္ဘာမြေပေါ်မှာ ဒီနေရာမှာ ပို့ထားတာ - ရှိစေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းဟာ မြင့်မြတ်ခြင်းဆီသို့ ဦးတည်နိုင်ပါတယ်။ ဆုတ်ယုတ်နိမ့်ဆင်းသွားတဲ့ နှလုံးသားများဖြင့် အကျွန်ုပ်တို့က လေ့လာသင်ကြားနေတဲ့အခါ - စစ်ပွဲရဲ့လမ်းဟာ အကျွန်ုပ်တို့ အလွန်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ တန်ဖိုးများအတွက် မနှစ်မြို့စရာကောင်းတဲ့ ဆင်းရဲမွဲတေခြင်းဆီသို့သာ ဦးတည်နိုင်ပါတယ်။
Posted by Maungtinyin (မောင်တင့်ယဉ်) at Thursday, December 16, 2010
အပျက်သဘောဆောင်သော အားအင်များအတွက် ဖြေဆေးတစ်ခုအဖြစ်...
ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်း- စစ်ပွဲရဲ့အဆိပ်ဖြေဆေးအနေဖြင့် ခ...
အဟိံသ , ချစ်ခြင်းမေတ္တာအတွက် ထိရောက်သောတွန်းအား တစ...
ခြွင်းချက်မရှိသော ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် အားလုံးထံသို့ ...
ငြိမ်းချမ်းရေး သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်မှု …. သင့်ရဲ့ ရေ...
ကိုယ်တိုင် သိမှုမှတဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရှာဖွေပါ
အခက်အခဲအကျပ်အတည်းကာလ ဖြတ်သန်းကျော်လွန်တဲ့ လမ်း